Mampianatra mivondrona ao amin’ny UPCM « Avoahay haingana ny datim-panadinana »
Eliana Bezaza « Foano ny fanadinana amin'ity taona ity »
Hisy ny fanadinam-panjakana ary nampahafantatra ireo daty ofisialy hanatanterahana izany ny filoha Andry Rajoelina nandritra ny fandaharana manokana tamin’ny haino aman-jery ny alin’ny alahady 12 jolay 2020.
Fampianarana Tokony ho vakansy anio ny mpianatra
Raha ny tetiandrom-pampianarana eo anivon` ny ministeran` ny fanabeazam-pirenena sy ny fampiofanana teknika, dia mifarana anio, 30 jona, ny taom-pianarana taona 2019-2020.
Seces Antananarivo “Tsy azo ekena ny gaboraraka sy tsy marina”
Manoloana ny toe-draharaham-pirenena dia namoaka fanambarana omaly maraina ny eo anivon’ny sendikan’ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra eto Antananarivo.
Fanadinam-panjakana CEPE sy BEPC Hanomboka tsy ho ela ny fanontana ny laza adina
Efa vita roa herinandro lasa izay ny laza adina ho an’ny fanadinana CEPE, raha afak’omaly kosa no vita ny an’ny fanadinam-panjakana BEPC, raha araka ny fanazavan’Atoa Andrianiriana Feno Soja,
Oniversite eto Madagasikara Hiroso amin` ny fanavaozana
Ho fanohizana ny fametrahana ny fenitry ny fanabeazana ho an’ny rehetra dia ezahina ny fanitarana ny fampianarana ambaratonga ambony mba hanantona hatrany ny vahoaka eny ifotony, hoy ny governemanta Malagasy.
Oniversitem-panjakana Hampiditra mpampianatra 600 isa
Miisa 1 028 823 ny mpianatry ny oniversitem-panjakana eto Madagasikara, raha ny tatitry ny minisiteran’ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa. 17 66
Sekoly tsy miankina Tsy voajery mihitsy…
Ireo mpianatra tsy manala fanadinam-panjakana (classes intermediaires) dia tsy mbola miverina an-tsekoly. Nanamafy moa ny minisitry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana no sady filohan` ny CCO COVID-19, Tianarivelo Razafimahefa, fa “ny fiverenan` ireo mpianatra an-tsekoly dia natokana ho an` ireo mpianatra manala fanadinana.
Mangataka ny hamoahana haingana ny datin’ny fanadinam-panjakana CEPE sy BEPC ny Union des professeurs certifiés de Madagascar na ny UPCM.
Diso mitaintaina loatra ny Ray aman-dRenin’ny mpianatra sy ny mpianatra hoy izy ireo raha nitafa tamin’ny mpanao gazety izy ny sabotsy lasa teo. Toraka izany koa ny fanapahan-kevitra tokony horaisina amin’ireo kilasy tsy hiatrika ny fanadinam-panjakana. Takian’izy ireo ihany koa ny hijeren’ny Fitondram-panjakana ny vacation-n’ireo mpampianatra mbola tsy voaloa mba hampirindra araka ny tokony ho izy izany fanadinam-panjakana izany. Nomarihin’ireto mpanabe mivondrona ao amin’ny UPCM ireo moa fa tokony ho teknisianin’ny fanabeazana, mahalala tsara ny olana sedrain’ny fanabeazana eto amintsika ihany koa no hapetraka ho ministra hitantanana ity ministera iray ity. Marihina moa fa efa manana drafi-panarenana hatolotra ny Fitondram-panjakana hanatsarana ny kalitaon’ny fanabeazana eto amintsika ny UPCM. Tanjon’izy ireo ny hamerenana ny hasin’ny fanabeazana eto amintsika.